साफ च्याम्पियनसिप: भारत र श्रीलंका आज भिड्दै
प्रकासित मिति : २१ आश्विन २०७८, बिहीबार प्रकासित समय : १३:११
काठमाडौं । दक्षिण एसियाली फुटबल प्रतियोगिता साफ च्याम्पियनसिपमा आज भारत र श्रीलंका भिड्दै छन् । फाइनल प्रवेशको सम्भावना गुमाई सकेको श्रीलंकाले भारतविरुद्ध जितका लागि हरसम्भव प्रयत्न गर्ने निश्चित छ ।
अपेक्षित सुरुआत गर्न नसकेको प्रतियोगिताको सर्वाधिक सफल टोली भारतलाई पनि आजको खेलमा जित्नै पर्ने दबाब छ । दक्षिण एसियाली फुटबलको महारथी भारतलाई पहिलो खेलमा १० जना सीमित भएको बंगलादेशले १–१ गोलको बराबरीमा रोकेको थियो ।
यस्तै पहिलो खेलमा बंगलादेशसँगै १–० गोलको नतिजामा पराजित भएको श्रीलंकाले दोस्रो खेलमा नेपालसँग ३–२ गोलको नतिजामा हार बेहोरेको थियो । बिहीबार माल्दिभ्सको मालेस्थित माल्दिभ्स नेसनल स्टेडियममा नेपाली समयअनुसार ४:४५ बजे सुरु हुनेछ ।
भारतको यो दोस्रो खेल हो भने श्रीलंकाको तेस्रो खेल हो । भारतले तेस्रो खेलमा नेपालको सामना गर्नेछ ।
आइतबार राति ९:४५ बजेदेखि सुरु हुने खेलमा नेपालले जित हासिल गरे पहिलो पटक फाइनल यात्रा तय गर्नेछ ।
सुरुआती दुई खेलमा जित निकालेको नेपाललाई भारत र बंगालदेशविरद्ध बाँकी दुई खेलबाट १ अंक आवश्यक छ ।
आज दिउँसो यी प्रदेशमा आंशिक देखि सामान्य बदली रही मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित वर्षाको सम्भावना
काठमाडौं। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग,मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आजको मौसम बुलेटिन जारी गरेको छ।
पहिलो हाफमा भारतविरुद्ध नेपालको गोलरहित बराबरी
काठमाडौं । नेपालले साफ च्याम्पियनसिप उपाधिका लागि अहिले भारतसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ ।
मार्केटिङ प्रमुख : मिन प्र. गिरी
मार्केटिङ सहायक : बिर ब. रावत